Lumina iyo Draco: 2 Deegaan Desktop Beddel Fudud oo Fudud | Laga soo bilaabo Linux
Lumina iyo Draco: 2 Degaano Desktop Fudud oo Fudud oo Fudud
Linux Post Ku Rakib | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux
Marka laga hadlayo Linux, waxaa jira waxyaabo badan oo si gooni gooni ah u sababa xamaasad iyo xamaasad badan oo ka mid ah dadka isticmaala Linux. Cunsurradan sida caadiga ah waxaa ku jira labadaba Deegaanka Desktop (DE) sida Maareeyayaasha Daaqadda (WM). Taasina waa sababta, mararka qaarkood, sida caadiga ah aan uga faalloonno qaarkood. Maantana waa wareegga labadan soo socda: Lumina iyo Draco.
Waxaa xusid mudan, intaadan si buuxda u galin iyaga, in Lumina iyo Draco uu 2 Meelaha Desktop-ka Fudud oo fudud (DE), kii ugu horreeyey waxaa laga dhisay gebi ahaanba xoqan, tan labaadna waa fargeeto kii koowaad.
Sidoo kale, way wanaagsan tahay in loo xusuusto kuwa jecel Deegaanka Desktop (DE), oo ah kii aan horey u soo sheegnay ee DE ahaa: Trinity iyo Moksha. Kuwaasoo dib loo eegay sida:
"Wareegyada (fargeetada) deegaanadii hore ee loo yaqaan 'Desktop Environments' ee la casriyeeyay si loogu sii wado ka shaqeynta qaar ka mid ah GNU / Linux Distros ama dhowr, gaar ahaan si looga faa'iideysto awooddooda la soo gudbiyay, marka la eego isticmaalka kheyraadka yar (RAM, CPU)".
Sababta sababta, ka dib markaad dhammayso qoraalkan, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso waxyaabaha soo socda qoraallada la xiriira:
Iyo kuwa kale ee sida tooska ah ula xiriira: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Qoraxda, MATE, Lxde y LXQT.
1 Lumina iyo Draco: Degaanada Desktop (DE)
1.1 Waa maxay Lumina DE?
1.2 Astaamaha Lumina DE
1.3 Waa maxay Draco DE?
1.4 Astaamaha Draco DE
Lumina iyo Draco: Degaanada Desktop (DE)
Waa maxay Lumina DE?
Sida laga soo xigtay Websaydhka rasmiga ah ee Lumina DE, isla waa:
"Degaanka Miisaanka Miisaankiisu fudud yahay oo laga soo bilaabay dhulka hoostiisa si ay u yeeshaan raad yar, oo nidaamkaaga u siinaya waxqabadka ugu fiican ee suurtogalka ah. Oo waxaa loo dhisay inay si habsami leh ugu dhex socoto howlaha kombiyuutarka, iyada oo la siinayo koronto badan oo lagu dhisay hal xirmo rakibo oo ku habboon.".
Astaamaha Lumina DE
Soosaarayaasheedu waxay sheeganayaan inay taagan tahay iyo / ama ay kaga duwan tahay kuwa kale Deegaanka Desktop (DE) by:
Loogu talagalay in aad sifiican ulashaqeyso Distro-kan hada jira garab y TrueOS (Waa la joojiyay), inkasta oo si gaar ah ay ugu shaqeyso BSD Community Distros, guud ahaan. Si kastaba ha noqotee, Lumina DE ayaa sidoo kale si fudud loogu gudbin karaa Nidaam kasta oo Hawlgal ah, oo ay ku jiraan qaybinta Linux.
Ha u baahan adeegsiga mid ka mid ah qaab dhismeedka hirgelinta desktop-ka ee inta badan la isticmaalo (DBUS, policykit, consolekit, systemd, HALD, kuwo kale).
Kuma jiraan barnaamijyada "isticmaalaha ugu dambeeya" (daalacashada shabakadaha, macaamiisha iimaylka, softiweeriyada badan, xafiisyada xafiisyada, iwm.). Kaliya yutiilitiyada ay Lumina keensato ugu badnaan waa kuwa si gaar ah loogu qoray mashruuca guud ahaanna waxaa loogu talagalay waxqabadka asalka, taas oo ah, nooca yutiilitida. Tusaale ahaan, adeegga ugu weyn waa maareeyaha faylka.
Haysasho feyl qaabeynta qaab-qoraalka oo fudud si aad ugu dejiso cillad-bixiyeyaasha nidaamka oo dhan isticmaalayaasha cusub. Tani waxay u oggolaaneysaa iibiyeyaasha desktop-ka inay si sahal ah u sii dejiyaan nidaamka / is-beddelka is-dhexgalka si ay ugu shaqeeyaan kaliya isticmaalaha ugu dambeeya.
Sii naqshad naqshadeysan oo ku saleysan fiilooyin. Taas oo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu desktop-ka ka dhigo mid fudud / culus sida ay rabaan (sabab ahaan), iyadoo si fudud loo dooranayo plugins-yada ka shaqeyn doona miiskooda / guddiga.
Hawlaha sida ujeeddada guud ee nidaamka isku xirnaanta, taas oo ah, inay awood u leedahay inay si fudud uga shaqeyso nooc kasta / cabbirka qalabka ama shaashadda.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo xiriiriyeyaasha soo socda: 1 link, 2 link y 3 link.
Waa maxay Draco DE?
Sida laga soo xigtay Bogga rasmiga ah ee Draco DE, isla waa:
"Deegaan desktop fudud oo fudud. In kasta oo ay yartahay, waxay soo bandhigaysaa isdhexgalka XDG, isdhexgalka iyo adeegyada freeesktop, keydinta iyo maareynta awooda, desktop, dashboard, taageero ilaalin badan, iyo waxbadan Draco kuma jiraan wax codsiyo adeegsade ah. Draco waxaa loo sameeyay oo loogu talagalay Slackware Linux, laakiin sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa RHEL / CentOS / Fedora iyo Linux kale. Draco waa fargeeto ah Lumina".
Astaamaha Draco DE
Si ka duwan Lumina DE, bogga internetka ee Draco DE ma bixinayo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan astaamaha ugu muhiimsan, laakiin xusuusnow taas Draco DE waa a fargeeto ah Lumina DESidaa darteed, ma jiri karo faraq badan. Si kastaba ha noqotee, waan soo saari karnaa oo muujin karnaa waxyaabaha soo socda:
Ku saabsan maaraynta keydinta: Awood u leh soo bandhigida keydinta la heli karo iyo aaladaha muraayadaha ee systray-ka, isla markaana siinaya otomaatig koritaan ah (iyo furid) qalabka keydinta / indhaha markii lagu daro, iyo si toos ah CD / DVD loo maqli karo.
Ku saabsan maaraynta tamarta: Waxay awood u leedahay inay hirgeliso adeegga shaashadda ee org.freedesktop.screenSaver, adeegga org.freedesktop.PowerManagement oo si otomaatig ah u siiya xaalad hakinta hurdada.
Marka laga hadlayo qaab-dhismeedkeeda, waxay u qaybsan tahay qaybaha soo socda: libDraco, Start-draco, draco-settings, draco-settings-x11, org.dracolinux.Desktop, org.dracolinux.Power, org.dracolinux.Powerd, org.dracolinux.Storage, org.dracolinux.XDG iyo xdg-open .
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" Kuwan 2 Deegaan Desktop cusub (DE) ka diiwaangashan Blog, loo yaqaan «Lumina y Draco», kuwaas oo inta badan lagu gartaa fudeyd iyo fudeyd, iyo iftiiminta in kan labaad yahay fargeeto kii ugu horreeyay; ayaa dan weyn iyo dan u leh, dhammaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Lumina iyo Draco: 2 Degaano Desktop Fudud oo Fudud oo Fudud
KDE Plasma 5.20 waxay la timid horumarin kala duwan oo ku saabsan qeybaheeda iyo in ka badan
Dagaal lumis ah, Ciyaaraha Epic waxay u huraan isticmaaleyaashooda macruufka